Shanyira Haninge - Zviitiko uye zvinhu zvekuita muHaninge
Pinda / Rejista
Nezve kushanyira haninge
Misangano yegore negore
Iwe hauna zviitiko mune izvo zvinyorwa.
Tsvaga haninge Facebook
Net kudhirowa paFrönäs, Gålö 28 Chivabvu na11 am
Ona, ita uye unzwe
Naturpasset uye Cykelpasset - Kunze mune zvisikwa uye edza orienteering
Dzidza kufamba nechikepe muDalarö
Shop uye shopu
Mabhokisi enyama ane nyama yakakodzwa yakasikwa kubva kupurazi reTyresta
Quality Hotel Winn - Usiku huno gara padyo nenzvimbo yakanaka yekunze yeRudan
Bhuka gwaro muTyresta - Rufu ruri musango repakutanga
MuHaninge kune nzvimbo dzinoverengeka dzekutengesa. Nzvimbo huru yekutenga, nzvimbo yeHaninge, ine nhamba huru yezvitoro. Imwe iri Port 73 pamusuwo weHaninge ine i.a. Coop Forum uye zvitoro zvine mazita anozivikanwa. Kukandwa kwedombo kune zvimwe zvitoro zvakaita seICA MAXI nezvimwewo .. Zvitoro zvidiki zviri muVästerhaninge uye muBrandbergen.
Kumucheto kwekumusoro kwegungwa bhendi ndiro Huvudskär Archipelago uye ndeimwe yenzvimbo dzeHaninge. Kune mazana maviri ezvitsuwa, cobs uye skerries. Pa Ålandsskär, musha wekuredza kubva kuMiddle Ages, kune zvivakwa. Tullhuset nhasi ihostel, mune mutyairi imba pane chioniso nezve nhoroondo yaHuvudskär. Kubva kuimba yemwenje iwe une yakanakisa maonero. Iyo Archipelago Foundation inotarisira chitsuwa uye iyo Hostel. Waxholmsbolaget inoshanda Huvudskär kuburikidza neFjärdlång kubva kuDalarö mazuva matatu pasvondo T / R muzhizha.
Utö nzvimbo yetende
PaUtö pane imwe yemisasa yezvitsuwa yakanakisa. Kurutivi chaipo pegungwa, neakanaka maonero echamhembe chiteshi chengarava neMysingen - uye chairo jecha pamhenderekedzo chaipo padhuze nekambi yemisasa! Iyo musasa ine imba yekubatira ine zvimbuzi, mashawa uye nzvimbo diki ine hotplates. Iyo musasa ndeye yemhando yekunze uye haina nzvimbo dzinoverengeka, saka vanhu havafanirwe kutora nzvimbo. Makirasi echikoro nemapoka mahombe, kune rimwe divi, anoda kubhuka pamberi. Pakubhuka uye neruzivo bata Hamnboden parunhare: 08-501 57 450
PaHäringe Castle iwe unogona kurarama samambo. Kana kuti sei kwete senge nyeredzi yemuvhi mune imwe imba yaGreta Garbo, mune yekutanga kubva kuma1930. Iwo makamuri ehotera ari akatenderedza castle uye mumapoka akasiyana siyana; zvese kubva kumakamuri ega kusvika kumakamuri e Deluxe nemasuti. Iwe unogona zvakare kugara wega mumba mako neyako gadheni, hombe yekugezera uye yakakwana yakagadzirirwa kicheni. Häringe inoyevedza uye idyllically iri maminetsi makumi maviri neshanu kumaodzanyemba kweStockholm. Pano, iro guta hombe rinonzwa kure kure kana iwe uchifamba pamusoro penzvimbo dzakakura, padyo nemusuwo wezvitsuwa nenzvimbo huru yekuchengetedza zvisikwa. Pano zviri nyore kunakidzwa uye kuzorora.
Imukaka mudiki wemuno mukereke ye Österhaninge, kumaodzanyemba kweStockholm. Isu tinogadzira machizi echinyakare emhando dzakasiyana, kubva pane yakanaka kirimu machizi kusvika kune semi-akaomarara putty chizi. Mazita echizi anotorwa kubva kunzvimbo dziri muHaninge - Tyresta, Vendelsö, Åva nevamwe. Mukaka watinogadzira unobva kumombe papurazi raStegsholm kuGålö. Tine shopu yepurazi yakavhurwa gore rese. Ona iyo webhusaiti yenguva dzazvino.
Nordic Trails inoronga mabhasikoro uye kukwira nzendo muStockholm archipelago iyo inokupa iwe ruzivo rwese rwaunoda kuti ugone kushandisa rinoshanda zororo iwe pachako munzvimbo yakanaka, yakadzikama uye yakasarudzika.
Inowanikwa muTyresta National Park. Mumba medu bhekari, tinobheka nemafuta ekugadzira sezvinobvira. Yedu tii nekofi zvakare zvakare organic / yakanaka kushambadzira. Isu tinove nechokwadi chekuti munhu wese anokwanisa kudya nekunwa kofi nesu, saka tinogona kupa chimwe chinhu kune imi muriwo vezvinomera, vegan, lactose kana gluten isingashiviriri. Kugamuchirwa kwatiri tinoshuvira Lena nevashandi. Isu takavhura gore rese uye tine hunhu pakona!
Muhofisi yekare yekumigodhi kune Utö Värdshus bar uye makamuri ekudyira ane marine uye epamhepo mamiriro. Pano iwe unogona kudya la carte zvese masikati uye kudya kwemanheru uye nekunwa zvese kubva kukofi kusvika kumashampeni. Muchirimo, veranda rekunze rine zuva rakavhurika kubva mangwanani kusvika manheru uye munguva yechando kana chando chapera, unogona kudziya iwe nechokoreti inopisa kana waini yakawanda pamberi pemoto unopaza padivi.
Muzvitsuwa zvekumaodzanyemba zveHaninge, neHårsfjärden kumadokero uye hombe bay Mysingen iri kunze yakatarisana negungwa, kune Muskö. Pano, chikepe cheSweden chaive nenheyo yadzo huru kubva muzana ramakore rechi1500 kusvika 1967. Nzvimbo hombe yemahombekombe inogara yakakura nzvimbo seGuta Rekare muStockholm yakaputirwa mudombo. Muma1960, mugero wakavakwa pakati peMuskö nenyika yakaoma. Tunnel yemotokari ingangoita makiromita matatu kureba uye inomhanya yakadzika semamita makumi matanhatu nematanhatu pazasi peiyo bay. PaMuskö pane dzimba mbiri huru kubva muzana ramakore gumi nemasere, Arbottna naLudvigsberg.
Munzvimbo yakanaka yezvitsuwa, Almasa inopa pekugara mune imwechete kana maviri makamuri - ese ane balcony kana patio, mazhinji ane maonero egungwa. Kudya kwemanheru kunogona kutorwa muimba yemanor kana pre-book chikafu chakasarudzika muSvartkrogen (Mugovera wakasarudzwa unofanirwa kuve wakafanogadzirirwa), Almasa inopa yakakura yakakura zviitiko zvegore rese, kumapoka uye misangano. Pane zvakawanda zvekutsvaga mukati nekukomberedza Almåsa. Isu tinokurudzira kufamba mune zvakasikwa, kunopa simba dhivi mugungwa kubva kune jecha pamhenderekedzo uye piers.
Dalarö yakavambwa muna 1636 uye pamusoro pemakore anga ari echiteshi uye chiteshi chevatyairi, yekutengesa uye chiteshi chengarava. Muzana ramakore rechi1800, Dalarö yakava nzvimbo yekutandarira uye nhasi inoyevedza yezororo, asi zvakare yakakosha poindi repikicha uye gedhi kuenda kuchamhembe kwezvitsuwa. Strindberg akadana Dalarö suwo reparadhiso. Muzvitsuwa zveDalarö ndiyo ngarava yepasirese yakachengetedzwa kubva muzana ramakore rechi1600. Iwe unoda kuzviwana uye kuziva zvimwe? Isu tinogadzirira kushanya kunotungamirirwa uye kushanya kwekuparara kwechikepe kwemapoka madiki kana akakura gore rese. Fonera 08 - 501 508 00 kana e-mail info@dalaro.se
Tullhuset Restaurant & Bhawa
Isu tinogadzira chikafu uye zvinwiwa zvine organic organic uye tinosarudza zvigadzirwa zvinoenderana nekuwanika uye yakanakisa mwaka wega wega yaunofanira kupa. Pakati pemwedzi yezhizha isu takavhurika 12.00 - 22.00 zuva rega rega. Munguva yechando, tinoshumira Dagens Lunch Mon-Fri 10.30 - 14.00. Isu tiri zvakare kuvhura Chishanu neMugovera 16.00-22.00. Bhuka muchato, rubhabhatidzo kana mariro nesu. Zvakare zvekudya. Runhare. 08-501 501 22 Kugamuchirwa kwakanaka!
Ekudden inzvimbo yako iwe inoronga makambi, makosi, misangano kana yakavanzika mhemberero. Bika chikafu chako wega mumakicheni edu mahombe, anoyevedza, odha zvekudya kubva kupurazi redu rakavakidzana kana iwe ungashuva kuti wako wekubika auye kuzobika chikafu chako pane saiti? Nesu, zviri nyore kubhuka uye kuita kuungana pane zvaunofunga.Nenzvimbo dzekugocha, sauna, jecha pamhenderekedzo, jetty uye nhabvu nhabvu, zviri nyore kurarama uye kubudirira. Pamwe ndosaka vashanyi vedu vachidzoka gore negore! Isu tinopa sarudzo senge yekuchenesa pamwe nemachira uye matauro ekubhuka kwako. Uyezve tora mukana wekubhuka yedu inozivikanwa inopisa tabhu! Tinobatsira
Dzokera muhomwe Utö
Nenharaunda yakakwira kupfuura mamashi ari muchiteshi, Bakfickan kadhi rakachengeteka rako iwe unenzara yemimhanzi, kupembera uye inonakidza kambani. Bakfickan yakavhurwa neMugovera kubva kuValborgsmässoafton kusvika kune yekutanga vhiki muna Gumiguru uye Wed-Sat panguva yezhizha yakakwira, maawa ekuvhura 22-03.
Nakidzwa nechikafu chakanaka uye yakanaka zvisikwa zvezvitsuwa, kubvarura bhasikoro kana kufamba kuenda kugungwa. Makamuri edu ehotera ari muzvivakwa zvakasiyana, zvakanyanya kutanga kubva pamazuva ekare senge yegungwa nzvimbo yekutandarira, asi ikozvino emakamuri ehotera emazuva ano uye akagadziridzwa uye mafurati ane shawa, WC, runhare neTV. Iwo makamuri anodziya uye anotonhorera uye kushongedzwa kwakasarudzwa nehunyanzvi kuzadza inonakidza yezvitsuwa zvisikwa. Bhuka mapakeji edu anodhura nezvikafu uye zviitiko zvinoenderana nechirimo, zhizha uye matsutso kana tafura yeKisimusi uye musika weKisimusi munaDecember. Pamusoro pechikomo chakananga kuVärdshuset kune hostel Skärgården inobata
Ipurazi remhuri rinorarama, 1km mukati kuGålö. Mune chaiyo sawmill, ipurazi redu café uye purazi shopu, patinotengesa nyama kubva kumhuka dzedu, nyama yemombe uye gwayana. Isuwo tinotengesa machizi akagadzirwa kubva kumukaka wedu pachedu pamwe nehove, huchi nezvimwe kubva kune vavakidzani vedu. Gore rese unogamuchirwa kuti utarise / chipfuwo / kubata pamhuka dzedu dzese kubva kutsuro kusvika kumhuru dziri pakati nepakati uye nemombe / mabhiza makuru. Mhuri yaBorg inokugamuchirai
Yemhando Hotera Winn Haninge
Iyo nyowani Quality Hotera Winn Haninge yakagadziridzwa zvizere uye yakavhurwa munguva pfupi yapfuura saFebruary 2017. Tinoda kukugamuchirai kuhotera yeSweden inosvikika uye imba yekutandarira yeHaninge! Iwe unotiwana isu tiri pakati peHaninge, maminetsi makumi maviri chete nechitima chevashandi kuenda kuStockholm C, maminetsi gumi kubva kuStockholm Fair uye nemaminiti 20 kufamba kuenda kukombi yezvitima Handen. Ihotera ine makamuri ehotera makumi maviri nemapfumbamwe akashongedzwa ayo anopawo makamuri emhuri hombe. Nesu, unogona kugara kusvika kuvanhu vatanhatu mune mamwe makamuri, akakwana kunyangwe ezvikwata zvemitambo. Gamuchirwa pese pazvinokodzera iwe!
Pakati peyakanaka Södertörn pane Fors Gård kufambidzana kubva kuViking Age. Isu takavhura gore rese kutenderera nekukwira chikoro, kukwira kwekunze uye zvidzidzo zvakavanzika pamabhiza edu eIceland, uye kune vane ruzivo vatasvi zvidzidzo zvepamusoro pamabhiza edu eLusitano. Isu tinogadzira misangano, kick-offs uye mapato emwenga ane hukama hwebhiza zvinoenderana nezvido. Iyo purazi ine zvivakwa zvinoverengeka zvine nhoroondo. Chigayo chekare chakatarisana nemachira chakange chiinewo saga uye mumakarahofuru ekare maigara vanhu vaishanda papurazi. Kugamuchirwa kufona 08-500 107 89 kana kutumira email pa bokningen.forsgard@telia.com
Ipurazi remhuri mhenyu, 1km kupinda Gålö. Tine mombe dzinosvika makumi mana dzemukaka uye mhuka dzinosvika makumi masere dzinochengeta mafuro emuouki akajeka. Zvitsuwa zviri munzvimbo inoshamisa yeStockholm. Munguva yemwaka wezhizha tine kofi yepurazi, bhekari repurazi neresitorendi yepurazi. Gara pasi patara redu uye unakirwe nemaonero eminda uye nemouki masango. Tinoda kuti unzwe mamiriro emhuri uye tariro kuti inonaka pane chikafu chedu chakagadzirwa uye nechingwa chekofi chakanaka.
Nåttarö ine mahombekombe makuru uye akanaka kwazvo ejecha rezvitsuwa. Jecha hombe ndiro rakakurumbira pamhenderekedzo asi zvakangonakawo ndizvo zvisingazivikanwe Skarsand. Chitsuwa chose inzvimbo inochengeterwa zvisikwa uye iwe unogona hove, kayak kana kukwira mumasango emashiripiti uye uwane zvinotaridzika zvakaita seMambokadzi Cave. Kune zvakare nzira ye snorkeling ine zviratidzo pasi pemvura nezve hupenyu hwepasi pemvura. Kure kuchamhembe igomo rakakwirira kwazvo pachitsuwa ichi, Bötsudden, nemaonero akanaka. PaNåttarö pane hostel, tavern, dzimba dzekugara, nzvimbo yetende uye chitoro chenyika. Iwe unosvika pano neWaxholmsbåt kubva kuNynäshamn.
Almåsa, Brandbergen Bio Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång nzvimbo yekuchengetedza, Gålö zvisikwa, Haninge C, Huvudskärsarkipelagen, Häringe castle, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Sandemardala dunhu repasi, Nzvimbo yenyika park, ölö, Årsta Castle, Öster- uye Västerhaninge
Username kana e-mail kero *
A password inotumirwa kune yako email kero.
Rwako ruzivo ruchashandiswa kuvandudza ruzivo rwako pawebhusaiti, maneja kuwana kune yako account uye nezvimwe zvinangwa zvinotsanangurwa mune zvedu zvakavanzika mutemo.